သူမရဲ့ ရင်သွေးလေးကို မွေးဖွားဖို့ အီတလီကိုခရီးထွက်လာရင်းနဲ့ ကိုရီးယားလေဆိပ်က ကစားကွင်းကိုမြင်တော့ မြန်မာပြည်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ သမီးလေးကို သတိရသွားတယ်ဆိုတဲ့ ချမ်းချမ် – Cele Top Stars
January 27, 2021 By admin2Celebrity
မင်္ဂလာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကတော့ ထူးခြားတဲ့ အသံပါဝါကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သီချင်းတွေကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုတတ်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချမ်းချမ်းရဲ့အသံလေးက နားဝင်ချိုပြီး နားထောင်လို့ကောင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက သဘောကျနှစ်ခြိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချမ်းချမ်းသီဆိုခဲ့တဲ့ တေးသီချင်းတွေ တော်တော်များများကလည်း ပရိသတ်တွေကြားမှာ အရမ်းရေပန်းစားပြီး အောင်မြင်နေလေ့ ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုဆိုရင် ချမ်းချမ်းက ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတာဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ကလေး နှစ်ယောက်မေမေဘဝကို ရောက်ရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာတော့ ချမ်းချမ်းက သူမရဲ့ရင်သွေးလေးကို မွေးဖွားဖို့အတွက် အီတလီနိုင်ငံကို တစ်ယောက်တည်းခရီးထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လေယာဉ်တွေ အဆင့်အဆင့်စီးပြီး ခရီးဆက်နေတဲ့ ချမ်းချမ်းက သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ မျှဝေပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုလည်း ချမ်းချမ်းက သမီးကြီးဂင်္ဂါကိုသတိရနေကြောင်း ဖွင့်ဟထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ချမ်းချမ်းက “Before flight to Doha…going around the duty free and kids play ground …I miss my baby ginngar! Goodbye Korea..I m coming Doha! Be positive..be strong.” ဆိုပြီး ပုံလေးတွေနဲ့အတူ တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချမ်းချမ်းရေးသားထားတာကတော့ Doha ကိုမသွားခင်မှာ ကိုရီးယားကိုဖြတ်ရင်းနဲ့ လေဆိပ်က ကစားကွင်းလေးကို မြင်လိုက်ရလို့ သမီးကြီးမြမိုးဂင်္ဂါကို သတိရသွားမိကြောင်း ပြောပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ အီတလီကိုရောက်ရှိဖို့အတွက် Doha ကိုခရီးဆက်နေတဲ့ ချမ်းချမ်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်နော်…. ။
မင်ျဂလာပါ ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော ခမျြးခမျြးကတော့ ထူးခွားတဲ့ အသံပါဝါကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး သီခငျြးတှကေို ခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ သီဆိုတတျတာ ဖွဈပါတယျ ။ ခမျြးခမျြးရဲ့အသံလေးက နားဝငျခြိုပွီး နားထောငျလို့ကောငျးတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ သဘောကနြှဈခွိုကျကွတာ ဖွဈပါတယျ ။ ခမျြးခမျြးသီဆိုခဲ့တဲ့ တေးသီခငျြးတှေ တျောတျောမြားမြားကလညျး ပရိသတျတှကွေားမှာ အရမျးရပေနျးစားပွီး အောငျမွငျနလေေ့ ရှိတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
အခုဆိုရငျ ခမျြးခမျြးက ကိုယျဝနျလှယျထားရတာဖွဈပွီး မကွာခငျမှာပဲ ကလေး နှဈယောကျမမေဘေဝကို ရောကျရှိတော့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ လကျရှိမှာတော့ ခမျြးခမျြးက သူမရဲ့ရငျသှေးလေးကို မှေးဖှားဖို့အတှကျ အီတလီနိုငျငံကို တဈယောကျတညျးခရီးထှကျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ လယောဉျတှေ အဆငျ့အဆငျ့စီးပွီး ခရီးဆကျနတေဲ့ ခမျြးခမျြးက သူမရဲ့လှုပျရှားမှုတှအေားလုံးကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ မြှဝပေေးနတော ဖွဈပါတယျ ။ အခုလညျး ခမျြးခမျြးက သမီးကွီးဂင်ျဂါကိုသတိရနကွေောငျး ဖှငျ့ဟထားတာ ဖွဈပါတယျ ။
ခမျြးခမျြးက “Before flight to Doha…going around the duty free and kids play ground …I miss my baby ginngar! Goodbye Korea..I m coming Doha! Be positive..be strong.” ဆိုပွီး ပုံလေးတှနေဲ့အတူ တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ ခမျြးခမျြးရေးသားထားတာကတော့ Doha ကိုမသှားခငျမှာ ကိုရီးယားကိုဖွတျရငျးနဲ့ လဆေိပျက ကစားကှငျးလေးကို မွငျလိုကျရလို့ သမီးကွီးမွမိုးဂင်ျဂါကို သတိရသှားမိကွောငျး ပွောပွထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ကဲ အီတလီကိုရောကျရှိဖို့အတှကျ Doha ကိုခရီးဆကျနတေဲ့ ခမျြးခမျြးရဲ့ပုံရိပျတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျပါတယျနျော…. ။